Anyị nyochara ekweisi Nix na NewSkill | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Kọmputa, Ngwa agha, Nyocha
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ekweisi wireless ịga kwa ụbọchị na ụzọ ụgbọ oloko, mgbe anyị na-eje ije na nkịta ahụ, mgbe anyị na-arụ ọrụ ... n'ahịa anyị nwere ike ịchọtar ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ha na nke ọnụahịa niile. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ndị dị ọnụ ala, nsogbu mbụ anyị ga-ahụ ga-abụ nke ndụ batrị, oge ọ ga - eji obere chioma ga - abịa n'oge na obere, ma ọ bụrụ na ọ ga - abịa.
Nsogbu ọzọ anyị ga - ahụ na ụdị ekweisi dị ọnụ ala, bụ ụda dị mma, mkpọ mkpọ nke ga-eme ka anyị ghara ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị anyị na olu zuru oke, ma ya fọdụzie ibupụta ụda ya dum. Na mgbakwunye, mgbe ụfọdụ, plastik ejiri tinye isi n’isi ya bụ nke adịghị mma nke na ọ naghị amanye anyị iwepụ ha ugboro ugboro. Ihe a niile anaghị eme na Nix nke NewSkill.
Ngwa ndị ahụ maka ngwa maka ndị egwuregwu, amalitela igwe ekweisi ikuku nke abụghị naanị ụdị onye ọrụ a, kamakwa onye ọ bụla nwere mkpa ịzụta ekweisi ụdị a, nke choo maka nma ma achoghi imefu ezigbo nzuzu n'ime ha. Igwe okwu Nix sitere na NewSkill bụ ekweisi na-emegharị na ntị anyị ma na-etinyekwa na ntị, na-adaba na ya ka ọ bụrụ na tupu ije ọ bụla na mberede ọ gaghị agagharị ma anyị nwere ike ịda.
Igweisi a, ha abụghị naanị maka ndị egwuregwu, ma NewSkill chọrọ ịmalite ngwaahịa nke na-aga n'ihu, ma nye anyị nchebe na mmiri na ọsụsọ, ka anyị wee nwee ike iji ha abụọ n'ụlọ, n'okporo ámá ma ọ bụ mgbe anyị na-apụ maka ịgba ọsọ ma ọ bụ gaa mgbatị ahụ, na-aghọ ekweisi ihe niile na-eme maka ihe ọ bụla ị na-eji kwa ụbọchị.
1 Nix nke NewSkill kwa ụbọchị
2 Autonomy nke Nix nke NewSkill
3 Ihe di n’igbe
4 Nkọwapụta NewSkill Nix
Nix nke NewSkill kwa ụbọchị
Mgbe ha nwalechara ha na omimi, Nix aburula ihe di m nma mgbe ọ bụla ị ga-aga igwu egwuregwu, ịga ije na nkịta, mgbe m na-arụ ọrụ n’ụlọ ma ọ bụ naanị mgbe m chọrọ ikiri fim ma ọ bụ egwuregwu na-amasị m. Ekele maka teknụzụ Ultra-bass agwakọtara, anyị na-enwe ọfụma bass, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ụda nwere ike ịhapụ ntakịrị ihe ịchọrọ, ọkachasị mgbe batrị na-achọ ịkwụsị.
Ekele igwe okwu nzaghachi dị elu, mgbe anyị jiri ha na-enwe egwuregwu ndị kachasị amasị anyị n'ịntanetị, ndị otu anyị ga-anụ anyị nke ọma na nke ọma, na-enweghị mgbagha ọ bụla. Mwekota nke igwe okwu n’ime ime obodo nke na –eme olu, na - enye anyi ohere iji ha mee ma obu nata oku mgbe anyi n’eji ha.
Eriri nke jikọtara ma ekweisi abụọ, anyị nwere ike iburu ha ma n'ihu ma n'azụ olu, ọnọdụ nke ikpeazụ bụ ihe atụpụtara karịa mgbe anyị ga-agagharị n'oge eji. Otu n'ime akụkụ M ga - emeziwanye bụ ederede nke bọtịnụ on / off na njikwa olu, ederede nke kwesịrị ịdị iche, iji nwee ike ịmata ọdịiche dị na ha site na imetụ aka ma ghara ịkwụsị ịgbanyụ ekweisi ọtụtụ oge kama ịba ụba olu.
Igweisi ekweisi a enweghị sistemụ ịkagbu mkpọtụ, sistemụ nke na-eme ka ọnụ ahịa ụdị ekweisi a dị elu, nke na-enye anyị ohere ịmara mkpọtụ ndị gbara anyị gburugburu oge niile na-egbochi anyị ma ọ bụ na-enye anyị nsogbu mgbe anyị na-eji ha, nke mere na anyị agaghị anọpụ iche n’ebe anyị bi.
Autonomy nke Nix nke NewSkill
Dị ka onye nrụpụta ahụ si kwuo, Nix na-enye anyị ihe ruru awa isii nke nnwere onwe, otu n'ime akụkụ ndị m na-echebara karịsịa mgbe m na-ahọrọ ekweisi nke ụdị a, na mgbakwunye na mma doro anya. Inwe na-ana ma m ama na smartwatch kwa abalị aghọwo a nkịtị ọrụ nke m na-achọghị ka tinye a Bluetooth ekweisi.
N'echiche a, na mgbe m gụsịrị ọtụtụ ule, enweela m ike inyocha, dịka ndị Nix iru obodo kwụụrụ nke ruo awa ise, na-eji ha ma ịge egwu na ige ntị na pọdkastị na olu dị ala. Ihe m chọpụtara bụ na ọchịchị obodo na-ebelata site na mmali na oke, mgbe anyị tinyere egwu na oke olu, ihe a na-ahụkarị na ekweisi niile nke ụdị a, mana na nke a ọ dị ka ọ dọtara uche m n'ihi nsị nke batrị. na-ata ahụhụ.
Mana n'ezie, na-eburu n'uche na ikpe nke olu egwu m na-ege bụ nke akọwapụtara nke ọma, n'ihi na ọ bụ abụ pụrụ iche ma ọ bụ na anyị nọ na mpaghara ebe mkpọtụ ụda karịa ka ọ dị na mbụ, nsogbu a anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị Ọ gwụla ma anyị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ hụrụ n'anya na-enwe egwu mgbe niile, ndị ọrụ m na-akwado ekweisi.
Kinddị ekweisi a na-enye anyị ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche nke mere na ha dabara n'ụzọ zuru oke na ntị anyị nakwa na na nkeji mbụ anyị jiri, ntị anyị anaghị akwụsị na-afụ ụfụ, ma ọ bụ n'ihi na pad dị nnọọ ukwuu, ma ọ bụ n'ihi na anyị dị obere anyị na-anụ mkpọtụ n'okporo ámá karịa egwu kachasị amasị anyị. Igbe ahụ na-enyekwa anyị obere ikpe iji bulite ekweisi n'ụzọ dị mma karị, ekweisi na-eme ka ọ dị n 'azụ, anyị nwere ike iburu ha n'ụzọ zuru oke n'olu na-ekekọta dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe atụ.
N'ụzọ dị otú a, anyị na-enwekarị ha n'aka, ma edepụtara ha ka ị nwee ike iji ha ọzọ. Ọ na-enyekwa eriri roba nke nha dị iche iche ka ekweisi wee tinye na ntị na ka anyị ghara ịghọta na anyị na-eyi ha. Anyị na-ahụkwa microUSB USB iji kwụnye ekweisi ụgwọ, yana ọhụụ NewSkill iji jide ekweisi ma ọ bụrụ na anyị achọghị itinye ha n'azụ ma jiri usoro magnetik ọ na-enye anyị.
Nkọwapụta NewSkill Nix
Batrị ruru 6 awa nke ojiji.
Oge nzaghachi: 20-20000Hz
Nri kachasị: 5mW
Rịba ama na ụda mkpọtụ: 93dB
Nkwupụta ụda: 6mm
Ogologo USB: 48.3cm
NewSkill Nix dị ọnụ ahịa ego na euro 39,95 na anyị nwere ike ịchọta ha ozugbo na websaịtị onye nrụpụta nwere mbupu n'efu, ebe anyị nwekwara ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa anyị na-eduzi ụmụ oke egwu egwuregwu, oche, mbadamba, ngwa, ahụigodo ...
Akwụkwọ akụkọ Newskill Nix Bluetooth
Zụta Nix na NewSkill
Dabara na nkwado na ntị
Bido ijide olu
Ha enweghị uche
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Anyị nyochara ekweisi Nix na NewSkill
Huawei Matebook D ka emegharịrị ọhụrụ na ndị ọhụụ na eserese ọhụụ